August 19, 2019 - khitalinmedia
August 19, 2019 Khitalin Media 0
ညီမလေး……သို့ သတိထား ညီမလေး.. အရေခွံဘယ်လောက်လဲလဲ မြွေဆိုတာ တီဖြစ်မသွားဘူး။ ပြောင်းလဲတဲ့ လောကကြီးမှာ လိုက်ဖက်ညီအောင် အရောင်ပြောင်းနေရင် ပုတ်သင်ညိုသာသာဖြစ်တော့မှာပေါ့။ ပတ္တမြားမှန်တယ်ဆိုတိုင်း နွံထဲဝင် မှိုင်ပြစရာလားကွယ် ခြေဆေးမခံရအောင် အိုင်ထဲထိုင်မယ့်အစား ရေသန့်လို့တံဆိပ်ကပ်နိုင်ရင် တန်ဖိုးတက်လာပါလိမ့်မယ် အိမ်နဲ့ဝေးတိုင်းလဲ.. အားငယ်စိတ်မပျက်ပါနဲ့ အမောပြေရေတစ်ခွက် အိမ်ပြေးလေးအတွက်တဲ့ အမေ နေ့တိုင်းခပ်ထားတယ်။ ညီမလေး.. […]
လာဘ်ပွင့်ချင်ပါသလား ? သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက လာဘ်ပိတ်စေတဲ့ ဤအရာတွေအမြန်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ
မိမိအသုံးပြု​နေတဲ့ ပိုက်​ဆံအိတ်​ထဲမှာမလိုအပ်​တဲ့အရာ​တွေထည့်​ထားမိတဲ့အခါမ​ကောင်းတဲစွမ်းအင်​​တွေဖြစ်​​ပေါ်တတ်​ပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျ၊ ငွေယိုပေါက်တွေများလိမ့်​မယ်။ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေကြုံရသလိုလာဘ် လာဘ ပိတ် တာတွေ။ငွေကြေး အလိမ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထို့အတူကောင်း​သောစွမ်းအင်​​တွေဖြစ်​​စေတတ်​သည့်​အရာ​တွေကိုသင့်​ပိုက်​ဆံအိတ်​ထဲမှာထည့်​ထားခဲ့မည်​ဆိုလျှင်​ငွေကြေး- အဆက်မပြတ်ဝင်သလိုကျန်းမာ ချမ်းသာ ကာ – ငွေကုန် ရတဲ့ ငွေထွက်ပေါက်တွေပိတ်ပစ်လိုက် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်​ပိုက်​ဆံအိတ်​မှာ ဒါ​တွေ​မထည့်​ပါနဲ့ သင့်​ပိုက်​ဆံအိတ်​(သို့မဟုတ်​)​ငွေ​သေတ္တာထဲမှာ ဘေလ်၊ ပြေစာ၊ […]
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ လုံခြုံမှုအတွက် သင့် Facebook ပေါ်မှ ဖြတ်ပစ်သင့်သော အချက်အလက် ၁၂မျိုး
သင့်Facebookက လုံခြုံမှုရှိရဲ့လား? ယနေ့ခေတ်မှာ Facebookဟာ အင်အား အကြီးမားဆုံး social media တွေထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ လူတွေဟာ နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုfacebookပေါ်မှာ မျှဝေကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် သင့်လုံခြုံမှုအတွက် facebookပေါ်မှာ မဖော်ပြသင့်တာတွေလဲရှိပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Cambridge Analytica Sandal ကိုအင်တာဗျူးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံမှုအတွက်facebookပေါ်မတင်သင့်သော […]
ရေ​ဘေးပြန်​လည်​ထူ​ထောင်​​ရေးအတွက်​ အငြိမ့်​ကသွားမယ့်​ နှင်းဆီအဖွဲ့
မြန်​မာပြည်​တစ်​ဝှမ်းလုံးက ရုပ်​ရှင်​အနုပညာ ချစ်​ပရိသတ်​​တွေရဲ့ ချစ်​ခင်​အား​ပေးမှုအ​မြောက်​အမြားကို ​ထွေး​ပွေ့ရယူထားတဲ့ နှင်းဆီအဖွဲ့ဟာ ​ရေဘေးသင့် မြန်မြ​ပည်သူ​တွအတွက် ပြည်​သူ​တွေနဲ့တစ်​သားတည်း ရပ်​တည်​သွား​တော့မှာဖြစ်​သလို ​ရေ​ဘေးပြန်​လည်​ထူ​ထောင်​​ရေးအတွက်​ အဓိကဦးစား​ပေးရည်​ရွယ်​ပြီး နှင်းဆီ​အငြိမ့်​ကို ကပြ​ဖျော်​​ဖြေပြီး ရန်​ပုံ​ငွေရှာ​ဖွေသွားမယ်​လို့ နင်းဆီအဖွဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီ နေတိုး နဲ့ အကယ်​ဒမီ မင်း​မော်​ကွန်းတို့က မီဒီယာ​တွေနဲ့အင်​တာဗျူးမှာ ​တရားဝင်​​ဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ​နောက်​လာမယ့်​ တစ်​လခွဲနဲ့ […]
မန္တ​လေး​ဆေးရုံကြီကို ဆေးလာကုတဲ့ အဖိုးအဖွားဆီက ဖုန်းရောငွေရောလိမ်သွားတာတဲ့ လုပ်ရက်လိုက်တာဗျာ
၁၈.၈.၂၀၁၉ နံနက် ​၆း၀၀ ခန့်​မှာအင်း​လေးနယ်​မှ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဖိုးဖိုးဖွားဖွား ၇၅ နှစ်​ဟာ မန္တ​လေး​ဆေးရုံကြီး၌ ဆေးကုသရန်​​ရောက်​လာရာ လူလိမ်​တ​ယောက်​ဟာ ရိုးသားတဲ့အဖိုးအဖွားတို့အားအတင်းဝင်​​ရောပြီး လူနာလာ​မေးသူ တနယ်​သားခြင်းအသွင်​ဖြင့််​ အဖိုးအားလက်​ဖက်​ရည်ဆိုင်​သို့​ခေါ်ထုတ်​သွားပြီး ခဏကြာ​တော့ အဖွားဆီသို့​ရောက်​လာပြီး​နောက်​ အဖိုးကပိုက်​ဆံအိပ်​​တောင်းခိုင်း​ကြောင်း​ပြောဆိုပြီး လိမ်​လည်​ယူ​ဆောင်​သွားရာ ၎င်းအိပ်​ထဲတွင်​ဖုန်း မှတ်​ပုံတင်​ ​ငွေ ပါသွား​ကြောင်းသိရပါတယ်။ သားသမီး​တွေဆီ ဆက်​သွယ်​ဖို့ဖုံးနံပါတ်​မသိပါ၍ ၎င်းမှတ်​ပုံတင်​ဖြင့်​​ငွေလွှဲခိုင်းမည်​ကိုစိုးရိမ်​​ကြောင်းအဖွားက​ပြောပါသည်။ […]
သင့်ကို ရူးရူးမူးမူးချစ်ပါတယ်ဆုိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးတောင်မှ သင့်ကိုစွန့်ခွာသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းများ
အမျိုးသမီးတွေဆိုတာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပီးခန့်မှန်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာ အမျိုးသားအများစုသိထားကြပါတယ်။ ဒါမဲ့ အဲ့ဒါကလဲ သူတို့ထွက်မသွားခင်အချိန်တစ်ခုတည်းအထိပါပဲ။ သင်အလုပ်မှာအလုပ်လုပ်နေစဉ် သူတို့ကတံခါးကိုဆောင့်ပိတ်ပီး သင့်ဘဝထဲကနေထာဝရ ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တာနဲ့ပတ်သတ်ပီး အကြောင်းရင်းတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁)သင့်ကိုမှီခိုလို့မရနိုင်ဘူးလို့သူမခံစားရတယ် အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ သူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတန်ဖိုးထားနှစ်သက်တာနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ်မှီခိုအားထားချင်တဲ့စိတ်လေးကလဲရှိတတ်ပါတယ်။ ပီးတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာ အမျိုးသားကိုအင်မတန်လိုအပ်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အချိန်လိုမျိုးပေါ့။ ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရပီးအားကိုးလို့ရတဲ့သူမျိုးကသာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုစိတ်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင်ခံစားရစေတာဖြစ်ပါတယ်။ (၂)သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်စံနှုန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်နေရတာ သူမစိတ်ကုန်လာပီ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကလဲ […]
မြန်မာတနိုင်ငံလုံး စစ်ဘေးရန် ငလျှင်ဘေး ရေဘေး လေဘေး မီးဘေး လွတ်မြောက်စေရန် တိုက်တွန်းထားသော သစ်တံခါးဆရာတော်ရဲ့ နှိုးဆော်စာ သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ သစ်တံခါးဆရာတော်၏ သားသမီးများနှင့် ဘဝဆက်ပဌာန်းဆက်ပါရမီရှင် သူတော်ကောင်းတို့ ၁၅.၈.၂၀၁၉ ကြာသာပတေးနေ့ ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ မေတ္တာ အခါတော်နေ့ ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာတနိုင်ငံလုံး တကမ္ဘာလုံး အေးချမ်း၍ စစ်ဘေးရန်တွေ […]
ကပ်ကြီးသုံးပါး ကင်းဝေးလိုလျှင်..ဒါတွေကိုရှောင် ဒါတွေကေိုဆာင်ပါ
လောဘထွန်းကားလာသဖြင့် ဆန်ရေစပါး ရှားပါး၍ အစားအစာ ငတ်မွတ်ခြင်းအား “ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ်”၊ ဒေါသလွန်ကဲသဖြင့် အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ကြသည့် လက်နက် ဘေးသင့်ခြင်း “သတ္တန္တရကပ်”၊ မောဟ လွန်ကဲသဖြင့် ရောဂါအမျိုးမျိုး ကပ်ရောက်ခြင်း “ရောဂန္တရကပ်”ဆိုသော ကပ်ကြီးသုံးပါး ကျရောက်ရ၏။ လောဘကြောင့် မီးဘေး၊ ဒေါသကြောင့် ရေဘေး၊ မောဟကြောင့် လေဘေးများ […]